Gcwalisa Uhlu lwe- SQL Server Amaphutha Nezinkinga ze-MDF
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen SQL Recovery Qedela Uhlu Lwamaphutha
SQL Server Amaphutha Nezinkinga
Qedela Uhlu Lwamaphutha Nezinkinga ku SQL Server Amafayela Esizinda sedatha e-MDF
0.01 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,502)
Lapho usebenzisa iMicrosoft SQL Server ukuze unamathisele noma ufinyelele ifayili ledatha le-MDF elonakele, uzobona imilayezo yamaphutha ehlukahlukene, engahle ikudide. Ngakho-ke, lapha sizozama ukufaka kuhlu wonke amaphutha angenzeka, ahlelwe ngokuya ngemvamisa yawo evela. Ngephutha ngalinye, sizochaza uphawu lwayo, sichaze isizathu salo esiqondile futhi sinikeze amafayela wesampula kanye nefayela elilungiswe yithi DataNumen SQL Recovery, ukuze uziqonde kangcono. Ngezansi sizosebenzisa i- 'xxx.MDF' ukuveza inkohlakalo yakho SQL Server Igama lefayela ledatha ye-MDF.
Ngokusekelwe ku SQL Server noma imilayezo yephutha ye-CHECKDB, kunezinhlobo ezintathu zamaphutha ezizodala ukwehluleka:
Amaphutha okwabiwa: Siyazi ukuthi idatha emafayilini e-MDF ne-NDF yabelwe njenge- amakhasi. Futhi kunamakhasi akhethekile asetshenziselwa ukuphathwa kwesabelo, ngokulandelayo:
Uhlobo lwekhasi Incazelo
Ikhasi le-GAM Gcina imininingwane yemephu yokwabiwa komhlaba wonke (GAM).
Ikhasi le-SGAM Gcina imininingwane eyabiwe yemephu yokwabiwa komhlaba wonke (SGAM).
Ikhasi le-IAM Imininingwane yemephu yesabelo sesitolo (IAM).
Ikhasi le-PFS Gcina imininingwane yokwabiwa kwe-PFS.
Uma ngabe amanye amakhasi okwabiwa ngenhla enamaphutha, noma idatha ephethwe yilawa makhasi esabelo ayihambelani nemininingwane yokwabiwa, lapho-ke SQL Server noma i-CHECKDB izobika amaphutha wokwabiwa.
Amaphutha wokuvumelana: Ukuze amakhasi ezisetshenziselwa ukugcina idatha, kufaka phakathi amakhasi wedatha namakhasi wezinkomba, uma SQL Server noma i-CHECKDB ithola noma yikuphi ukungahambisani phakathi kokuqukethwe kwekhasi ne-checksum, khona-ke bazobika ukungaguquguquki kwamaphutha.
Wonke amanye amaphutha: Kungaba namanye amaphutha angaweli ezigabeni ezimbili ezingenhla.
xxxx.mdf ayilona ifayela eliyisisekelo ledatha. (IMicrosoft SQL Server, Iphutha: 5171)
Unhlokweni wefayela 'i-xxxx.mdf' akuyona inhloko yefayela ledatha evumelekile. Isakhiwo se-FILE SIZE asilungile. （Microsoft SQL Server, Iphutha: 5172）
SQL Server ithole iphutha elinengqondo lokuvumelana ngokuhambisana ne-I / O: i-checksum engalungile
SQL Server ithole iphutha elinengqondo elingaguquguquki le-I / O: ikhasi elidabukile
Ususa amanye amarekhodi noma amanye amatafula ku-database ngephutha.
SQL Server inethuluzi elakhelwe ngaphakathi elibizwa nge- I-DBCC, eye I-CHECKDB futhi HLOLA izinketho ezingasiza ukulungisa i-database ye-MDF ekhohlakele. Kodwa-ke, kumafayili wedatha we-MDB owonakele kakhulu, I-DBCC CHECKDB futhi HLOLA nayo izokwehluleka.
Amaphutha okungaguquguquki abikwe yi-CHECKDB:
Umugqa ku-sys.xxx awunawo umugqa ofanayo ku-sys.xxx.
Iphutha lethebula: I-ID yento # #, i-ID yenkomba # # izokwakhiwa kabusha.
Le nkomba yetafula lesistimu ayikwazi ukwenziwa kabusha.
I-ID yento # #, i-ID yenkomba # #, i-ID yokuhlukanisa # #, i-ID yeyunithi eyabiwe # # (thayipha Engaziwa), i-ID yekhasi (# #: 560) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo.
Amaphutha okwabiwa abikwe yi-CHECKDB:
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) likhonjiswe yi-Next Pointer ye-IAM Page
I-Extent (##: ##) ku-ID ye-database # # imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Wonke amanye amaphutha abikwe yi-CHECKDB:
Yehlulekile: (- # #.
Iphutha le-I / O (i-ID yekhasi elibi) litholakele ngesikhathi kufundwa nge-offset 0x ###### kufayela 'xxxx.mdf'.
Isistimu Ayikwazanga Ukwenza kusebenze Okwanele Kwe-Database Ukwakha kabusha I-Log
Ukulahleka Kwedatha Lapho Kulungiswa Nge-CHECKDB
Ifayela libonakala lifinyezwe uhlelo lokusebenza.
Ngesikhathi kwenziwa kabusha umsebenzi ongene ngemvume ku-database 'xxxx', kwenzeke iphutha ku-ID yerekhodi lokungena.
DataNumen PSD Repair 2.9 ikhishwe ngoMeyi 4, 2021